Gudoomiye Kim Reynolds wuxuu ku dhawaaqay dhamaan dadka reer Iowans inay u qalmi karaan talaalka COV
By Halima Osman • Mar 17, 2021
Gudoomiye Kim Reynolds wuxuu ku dhawaaqay dhamaan dadka reer Iowans inay u qalmi karaan talaalka COVID-19 ilaa 5ta Abriil.
Reynolds waxay leedahay u-qalmitaanku wuu ballaadhi doonaa illaa iyo inta qoondaynta tallaalku ay kordhayso sida ay dawladda federaalku filayso.
Saraakiisha Aqalka Cad waxay yiraahdaan waxay filayaan inay si weyn kor ugu qaadaan qaadashada laga bilaabo usbuuca 29-ka Maarso. Tani waxay labalaabi kartaa sahayda todobaadlaha ah ee gobolka ee hadda.
Maanta, agaasimaha Caafimaadka Degmada Siouxland
By Halima Osman • Mar 16, 2021
Laba waaxood oo ka tirsan aagga Siouxland ayaa hadda soo maray kiisaskii ugu horreeyay ee noocyada U.K ee ku saabsan coronavirus-ka cusub.
Maanta, agaasimaha Caafimaadka Degmada Siouxland wuxuu xaqiijiyay hal kiis oo noocyada kala duwan ah in lagu wargaliyay saraakiisha caafimaadka ee Degmada Woodbury bilowgii Maarso. Ma jiraan kiisas kale oo la diiwaan geliyey.
Dhanka kale, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Waqooyiga-bari Nebraska ayaa dhowaan aragtay kiiskeedii ugu horreeyay. Waaxda caafimaadka waxay dabooshaa gobollada Cedar, Dixon, Wayne, iyo Thurston.
Waaxda Caafimaadka Nebraska waxay soo warinaysaa in noocyada kala duwan ee COVID-19 ee ka socda Boqo
By Halima Osman • Mar 15, 2021
Waaxda Caafimaadka Nebraska waxay soo warinaysaa in noocyada kala duwan ee COVID-19 ee ka socda Boqortooyada Ingiriiska laga helay Siouxland meel ka mid ah gobollada hoos yimaadda Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Northeast Nebraska. Tan waxaa ka mid ah gobollada Cedar, Dixon, Thurston, iyo Wayne. Noocani waa mid faafa badan wuxuuna sababi karaa jirro daran.
COVID-19 dhimashooyin iyo 412 kiis oo dheeri ah oo laxaqiijiyey.
By Halima Osman • Mar 12, 2021
Waaxdu waxay leedahay Degmada Woodbury, waxaa jiray 31 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay. Degmada Woodbury waxay leedahay 14-maalmood oo ah heerka COVID-19 oo ah 6,4 boqolkiiba, taas oo aan waxba laga badalin shalay.
Qof kale oo degan degmada Crawford County ayaa u dhintay coronavirus-ka cusub, sida lagu sheegay tirakoobka gobolka.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa khamiistii waxay ka warbixineysay 19 dhimasho dheeraad ah oo C
By Halima Osman • Mar 11, 2021
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa khamiistii waxay ka warbixineysay 19 dhimasho dheeraad ah oo COVID-19 ah iyo 412 xaaladood oo dheeri ah oo la xaqiijiyay.
Jurors ayaa sii daayay wariye Iowa ah oo basbaas lagu buufiyay oo ay xireen booliska isagoo tabinaya
By Halima Osman • Mar 10, 2021
Jurors ayaa sii daayay wariye Iowa ah oo basbaas lagu buufiyay oo ay xireen booliska isagoo tabinayay dibadbax. Dhaleeceeyayaashu waxay ku qosleen kiiska inay yihiin weerar lagu qaaday xorriyadda saxaafadda iyo ku takri-fal xeer ilaaliyaha.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay seddex dhimasho oo kale oo ka dhacay Gobolka
By Halima Osman • Mar 4, 2021
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo warisay seddex dhimasho oo kale oo ka dhacay Gobolka Woodbury sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo 35 oo gobolka oo dhan ah. Laba-boqol iyo afar iyo toban deganayaasha Degmada Woodbury ayaa dhintay tan iyo bilowgii Faafida.
Hadda waxaa ka dilaacaya darsin xarumo daryeel muddo-dheer ah oo ku yaal Iowa, iyada oo aan wax dhibaato ah ka jirin hoyga daryeelka ee waqooyiga-galbeed Iowa.
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa diiwaangelisay seddex dhimasho oo kale gobolka oo dhan sa
Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa diiwaangelisay seddex dhimasho oo kale gobolka oo dhan sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19 iyo in ka badan 600 natiijooyin cusub oo wanaagsan oo tijaabo ah, oo ay ku jiraan 28 gobolka Woodbury.
Tirada isbitaalada la dhigey waxay ka hooseysay 200 magaalada Iowa. Labada xarun caafimaad ee Sioux City waxay arkeen hoos u dhac ku saabsan 30% bukaannada qaba COVID-19. Waxaa jiray 15 shalay iyo 11 maanta. Heerka tijaabada ah ee 14-maalmood ayaa waxoogaa ah ilaa 6%.
Biilasha ballaarin doona iskuullada charter-ka ee Iowa isla markaana abuuri doona deeqo waxbarasho o
By Halima Osman • Mar 3, 2021
Biilasha ballaarin doona iskuullada charter-ka ee Iowa isla markaana abuuri doona deeqo waxbarasho oo lagu bixin karo waxbarashada iskuullada gaarka loo leeyahay ayaa horay loogu sii wadaa sidii soo jeedimo gooni ah oo ka tirsan Aqalka Iowa.
Biilasha xulashada iskuulka waxay kahadlayaan laba mudnaanta sharciyeed ee gudoomiye Kim Reynolds oo horey ugu soo gudbay golaha guurtida iyadoo qayb ka ah hal xirmo.
Maanta, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warisay hal dhimasho oo kale gobolka oo dhan
By Halima Osman • Mar 1, 2021
Maanta, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa waxay soo warisay hal dhimasho oo kale gobolka oo dhan, oo loogu talagalay 5,472 dhimasho tan iyo bilowgii cudurka faafa ee COVID-19. Waxaa jiray 200 oo tijaabo oo wanaagsan, oo ay ku jiraan seddex kale oo ka tirsan Degmada Woodbury.
Maanta, Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay bilaabaysaa tallaalka Vaccinate.Iowa.gov
By Halima Osman • Feb 26, 2021
Maanta, Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay bilaabaysaa tallaalka Vaccinate.Iowa.gov, degel cusub oo bixiya macluumaad ku saabsan mudnaanta tallaalka iyo u-qalmitaanka, ilaha loo heli karo Iowans da'da 65 iyo ka weyn. Isticmaalayaasha ayaa geli kara koodhka siibkooda si ay uga helaan adeeg bixiyaasha talaalka agtooda. Mar haddii la doorto adeeg bixiye, jadwalka ballanta waxaa lagu sameyn doonaa websaydhka bixiyaha ama jadwalka jadwalka.
Gobolka Iowa ayaa qorsheynaya inuu soo bandhigo degel cusub beri si loo helo macluumaad dheeri ah oo
By Halima Osman • Feb 25, 2021
Gobolka Iowa ayaa qorsheynaya inuu soo bandhigo degel cusub beri si loo helo macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo helo tallaalada COVID-19.
Si kastaba ha noqotee, Gudoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyay intii lagu jiray shir jaraa'id maanta Iowans ma awoodi doonaan inay ballan ka qabsadaan goobta www.vaccinate.iowa.gov.
Badhasaabka Nebraska wuxuu leeyahay dadweynaha guud ee gobolka waxay bilaabi karaan inay helaan tall
By Halima Osman • Feb 18, 2021
Badhasaabka Nebraska wuxuu leeyahay dadweynaha guud ee gobolka waxay bilaabi karaan inay helaan tallaalka COVID-19 horraantii Abriil ama Maajo.
Pete Ricketts wuxuu uqadiyaa tallaabada kororka qiyaasaha, oo ay kujirto ansixinta tallaalka cusub ee Johnson iyo Johnson.
Gobolku wuxuu bilaabi doonaa talaalka da'da 50 ilaa 64, oo uu ku xigi doono 16 ilaa 40. Ricketts ayaa qirtay in gobolka uu u baahan yahay inuu horumariyo darajadiisa qaran iyadoo la qeybinayo talaalka.
Arbacadii, Waaxda Caafimaadka ee Iowa waxay diiwaangelisay 43 dhimasho dheeraad ah sababo la xiriira
By Halima Osman • Feb 17, 2021
Arbacadii, Waaxda Caafimaadka ee Iowa waxay diiwaangelisay 43 dhimasho dheeraad ah sababo la xiriira dhibaatooyinka COVID-19, oo ay ku jiraan laba kale oo ka tirsan Gobolka Woodbury. Gobolka ayaa sidoo kale ku daray in ka badan 600 oo kiis oo cusub. Tirada isbitaalada la seexinayo ee labada xarumood ee caafimaad ee magaalada Sioux City ayaa laba jibaarmay maalin gudaheed ilaa iyo toban bukaan ah. Si kastaba ha noqotee, lambarkaasi waa 11% rikoodhka sare ee 108 oo dib loo dhigay 1-dii Diseembar.
Maalintii labaad ee heerkulka Arctic ee ku baahsan Gobollada Dhexe ayaa sababay in korontada ay go'd
By Halima Osman • Feb 16, 2021
Maalintii labaad ee heerkulka Arctic ee ku baahsan Gobollada Dhexe ayaa sababay in korontada ay go'do subaxnimadii Talaadada ee Nebraska iyo baaq ku saabsan ilaalinta tamarta ee Iowa. Shirkadaha korantada ee Nebraska ayaa sheegay in koronto la’aanta qorshaysan ay soo afjartay subaxnimadii. Laakiin ka bixitaanno badan ayaa loo baahan karaa gelinka dambe ee maalinta.
Afhayeen u hadlay MidAmerican Energy ayaa sheegay in shirkaddu ay si wanaagsan u qalabeysan tahay si ay usii wado tamarta aan kala go ’lahayn ee ay u gaarsiiso macaamiisha korontada inta lagu guda jiro qabowgan.
Mas'uuliyiinta gobolka ayaa hoos u dhigi doona saamiga toddobaadka soo socda ee qiyaasaha tallaalka
By Halima Osman • Feb 12, 2021
Mas'uuliyiinta gobolka ayaa hoos u dhigi doona saamiga toddobaadka soo socda ee qiyaasaha tallaalka 'Covid' ee faro-ku-tiriska ah ee gobollada Iowa oo dib uga dhacay helitaanka tallaalada la maamulo, sida laga soo xigtay Radio Iowa. Qiyaaso ayaa la qaybinayaa, iyadoo lagu saleynayo tirada dadka. Kusimaha agaasimaha waaxda caafimaadka bulshada ee Iowa Kelly Garcia ayaa sheegtay in hadafku uu yahay in gobolada ay helaan ugu yaraan 80% qiyaasta todobaadlaha ah ee albaabka - shan degmo ayaa ka hooseeya xadkaas. Ma aysan magacaabin shanta gobol.
Barasaabka Iowa Kim Reynolds ayaa Arbacadii shirkeeda jaraa’id ku shaacisay in degel loogu tala gala
By Halima Osman • Feb 10, 2021
Barasaabka Iowa Kim Reynolds ayaa Arbacadii shirkeeda jaraa’id ku shaacisay in degel loogu tala galay in lagu jadwaleeyo talaalada uu socdo. Gobolku wuxuu u xushay Microsoft inuu u horumariyo websaydhka Iowans gobolka oo dhan si loo qorsheeyo tallaallada. Waa inay kor u kacdaa oo socotaa laba toddobaad gudahood. Reynolds ayaa sidoo kale sheegay in dhibaatada ugu weyn ee dhamaan ka jirta talaalada ay tahay in gobolka uusan helin wax ku filan.
Iowa waxay soo werisay 35 kale oo COVID-19 ah iyo 713 kiis oo dheeri ah oo laxaqiijiyay maanta maadd
By Halima Osman • Feb 9, 2021
Iowa waxay soo werisay 35 kale oo COVID-19 ah iyo 713 kiis oo dheeri ah oo laxaqiijiyay maanta maaddaama tirada degmooyin leh heer sare oo 14 maalmood ah ay sii soconayaan inay sii yaraadaan.
10-kii subaxnimo ee maanta, gobolka wuxuu soo sheegayay 5,145 dhimasho la xiriirta COVID-19, sida lagu sheegay bogga internetka ee coronavirus.iowa.gov.
Degmada Woodbury, waxaa ka jiray 18 kiis oo cusub oo lagu daray wadarta tirinta kiisaska 24-kii saac ee la soo dhaafay mana jirto dhimasho cusub.
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa galab waqtigeedii ka mid ah xaraashay xaraashka ugu saree
By Halima Osman • Feb 8, 2021
Gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds ayaa galab waqtigeedii ka mid ah xaraashay xaraashka ugu sareeya si ay lacag ugu ururiso samafalayaasheeda ugu sareeya ololeyaasha ee sadaqada.
Xaraashka 2019 wuxuu soo muuqday goor dhow markii xafiiskeeda uu sii daayay emayl faahfaahinaya isbahaysiga ay la leedahay Iowa Select Farms, oo ka mid ah soo saarayaasha doofaarka ee ugu weyn dalka. Iowa Select waxaa iska leh Deb iyo Jeff Hansen oo ka tirsan West Des Moines, kuwaas oo siiyay ku dhowaad $ 300,000 si ay uga caawiso maalgelinta ololeyaasha Reynolds.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa ku soo warramey 804 kiisas cusub oo wanaagsan oo ka dhacay
By Halima Osman • Feb 5, 2021
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka ayaa ku soo warramey 804 kiisas cusub oo wanaagsan oo ka dhacay Iowa inta u dhexeysa 10-ka subaxnimo ee Khamiista iyo 10-ka subaxnimo ee Jimcaha, sida laga soo xigtay websaydhka coronavirus.iowa.gov. Sidoo kale waxaa jiray 44 kale oo COVID-19 ah oo ku dhintay Iowa 24-kii saac ee la soo dhaafay, taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada gobolka 5,067.
Heerka Iowa ee 14-maalmood ayaa hoos u dhacay ilaa 9.1%, taas oo ka hooseysa 9.3% oo la soo sheegay Khamiistii.
Iowa waxay gaadhay taariikhdii dhimashada 5000 ee maanta. Waxay ahayd 24-kii Maarso, 2020
By Halima Osman • Feb 4, 2021
Iowa waxay gaadhay taariikhdii dhimashada 5000 ee maanta. Waxay ahayd 24-kii Maarso, 2020, markii Waaxda Caafimaadka Bulshada ee gobolka ay xaqiijisay geeridii ugu horreysay ee COVID-19 ee Iowa.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa 13 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID
By Halima Osman • Feb 2, 2021
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay soo warineysaa 13 kale oo Iowans ah inay u dhinteen COVID-19 24 saac gudahood, in kabadan 800 oo kiisas dheeri ah.
Waxaa jira ku dhowaad 400 oo isbitaal la dhigey guud ahaan gobolka oo qaba fayraska. Taasi waxay kordheysaa 22 maalintii hore, oo ay ku jiraan afar kale oo ka tirsan labada isbitaal ee Magaalada Sioux, wadar ahaan bukaanada 25.
Heerka waxtarka ee 14-tijaabo ee Gobolka Woodbury wuxuu kudhowyahay kalabar 15% marinka 7.7%.
Saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Iowa ayaa sheegay in baaritaanka coronavirus lagu aqoonsaday s
By Halima Osman • Feb 1, 2021
Saraakiisha caafimaadka dadweynaha ee Iowa ayaa sheegay in baaritaanka coronavirus lagu aqoonsaday seddex kiis oo Iowa ah oo ku saabsan noocyada kaladuwan ee viruska laga helay Boqortooyada Ingiriiska. Laba ka mid ah kiisaska ayaa laga helay Gobolka Johnson ee bariga Iowa iyo mid ka tirsan degmada Bremer ee waqooyi-bari Iowa. Iyada oo ku saleysan daraasad cilmiyaysan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee loo yaqaan B.1.1.7. cilmi baarayaashu waxay rumeysan yihiin inuu ku fidi karo si ka fudud culeyskii asalka ahaa ee COVID-19 waxaana la rumeysan yahay inuu ka sii dhiman yahay.